TOKO 100 Fiainana Fiainana Ho an'ny 2020 - Quotes Pedia
111 isa sy teny nolazainy
Betsaka ny olona mbola manisa ny isan'ny taona iainany, saingy tsy tokony ho izany no fomba. Zava-dehibe ny ho azo antoka fa miaina mandritra ireo taona ireo ary avereno antoka fa manana fiainana ampy ianao mandritra ireo taona rehetra hiainanao.
Indraindray dia mijoro miatrika fanenjehana be dia be eo amin'ny fiainantsika isika ary mijanona tsy mahita ny hazavana amin'ireo zavatra ireo. Mazava ho azy fa mety tsy hitranga arakaraka ny fanirianao mandritra ny fotoana rehetra ireo zavatra ireo, saingy tsy tokony havelanao hanimba ireo toetra ratsy ao aminao ireo vibe ratsy ireo.
Mety hisy fotoana hihaona amin'ny tsy fahombiazana nefa tsara izany satria efa fantatra ireo fotoana ratsy ireo hanome lesona tsara anao indrindra amin'ny fiainanao. Amin'izany toe-javatra izany, dia zava-dehibe ny handalovanao ao amin'ny resaka aina satria hanampy anao hamerina izany vibe tsara izany ao aminao.
Ny vibe toy izany dia hanampy anao amin'ny fanamafisam-peo aminao indray, hany ka vao mainka hampahery anao ianao ary avy eo dia ataovy izay rehetra ataonao voalohany indrindra.
Tsy ho lasa mitovy mihitsy ny fiainana amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fiainana dia hihaona fotoana maromaro izay tsy mandeha araka ny fanirianao. Tsara izany ary mila manitsy ny fomba fanao ianao.
Tsy hitranga amin'ny zava-drehetra ny zava-drehetra, fa tsy hanana safidy amin'ny fotoana maro ianao. Tsy maninona ny fandehanana amin'ireo zava-nitranga rehetra amin'ny fiainana ireo satria hanome lesona anao amin'ny fiainanao izy ireo. Miankina amin'ny fomba iatrehana ireo olana tonga amin'ny alehanao ny zavatra niainanao.
Raha hendry ianao dia tsy hifikitra amin'ny zavatra tsy dia manan-danja loatra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny lafiny iray, tokony hino hatrany ny manangona ireo zavatra niainanao avy amin'ireo zava-mitranga iainana ary avy eo hampidirina ireo lesona ireo amin'ny ho avy.
Ny fotoana ratsy dia manome anao ny lesona tsara indrindra amin'ny fiainanao, ary be dia be izy ireo mba hahazoanao betsaka ny fianaranao ny lesona avy amin'ireny tranga ireny. Ireo resaka aina hanampy anao hamerina ilay fitaomam-panahy izay mety ho fatiantoka ianao rehefa mandehandeha amin'ny sakeli-piainanao.
Mazava ho azy, zava-dehibe izy ireo mba hahazoana antoka fa feno angovo indray ianao. Manomana anao ihany koa izy ireo mba hialoha lalana ka ahafahanao miatrika ireo zava-tsarotra rehetra izay mbola ho avy amin'ny làlanao.
Isaky ny taona isika no isaina, sa tsy izany? Efa nieritreritra ve ianao raha izany no tena izy ...
Mila fahasahiranana eo amin'ny fiainana ny olombelona satria ilaina ny mankafy ny fahombiazana. - APJ Abdul Kalam
Isika olombelona dia manana fironana mihintsana amin'ny fifaliana. Raha maharitra ela ilay fifaliana,…
Manomboka amin'ny faran'ny faritra mampionona anao ny fiainana. - Neale Donald Walsch
Samy manana nofy sy tanjona eo amin'ny fiainana daholo isika rehetra. Fa matetika dia voafatin'ny zavatra hitantsika izany…
Arakaraka ny hankalazanao sy hankalazanao ny fiainanao no vao mivelona amin'ny fiainana. - Oprah Winfrey
Fitahiana ho antsika rehetra ny fiainana. Dia fitsangatsanganana mahafinaritra izay manana ny anjarany…
Avelao ny fiainanao ary manadino ny taonanao. - Jean Paul
Raha te-hiaina amim-pifaliana ny fiainanao ianao, aza mieritreritra ny taonanao. Tsy maintsy mandinika ianao…
Rehefa manoratra ny tantaran'ny fiainanao dia aza avela hisy olona hitana ny penina. - Harley Davidson
Sarobidy ny fiainana. Zava-dehibe ny hampiasantsika azy tsirairay. Isan'ireo fiakarana, isika…
Na aiza na aiza fiainana, dia mamelà fahasoavana. - ohabolana frantsay taloha
Aza mitsahatra ny mianatra intsony, satria ny fiainana tsy mitsahatra ny fampianarana. - Tsy fantatra
Ny mpampianatra lehibe indrindra azonao hatrizay dia ny fiainanao! Ny fahalalana dia mety ho avy na aiza na aiza sy amin'ny toerana rehetra. Our ...
Voafetra ny fotoanao, koa aza lany andro amin'ny fiainana olon-kafa izany. - Steve Jobs
Voafetra ny fotoanao, koa aza lany andro amin'ny fiainana olon-kafa izany. Aza voafandrika dogma -…
Tsy ny hahita ny tenanao no fiainana. Ny fiainana dia ny famoronana ny tenanao. - George Bernard Shaw
Amin'ny maha-olombelona antsika, dia nahazo talenta isan-karazany izahay. Isika rehetra dia manana zavatra manokana momba ny tenantsika…
Tiavo ny fiainana iainanao. Hiaina ny fiainana tianao. - Bob Marley
Fitahiana ny fiainana ary tokony hankasitraka izany isika isaky ny mandalo. Manokatra antsika izany…
Safidy sarotra, fiainana mora foana. Safidy mora, fiainana sarotra. - Jerzy Gregorek
Tsy mahita ny fiainana sambatra ianao. Manao azy ianao. - Camilla Eyring Kimball
Ny fahasambarana dia zavatra ho azonao amin'ny zavatra kely indrindra. Ary hahitanao fahasambarana, ianao…
Mampianatra lesona sarobidy amintsika ny fotoan-tsarotra. - Tsy fantatra
Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika rehefa mahatsiaro reraka isika; mahatsiaro ambany izahay. Misy fotoana ao amin'ny…
Ovaho ny fihetsinao ary hanova ny fiainanao. - Tsy fantatra
Ny antsasaky ny antony tsy fahombiazanao dia noho ny fihetsikao amin'ny fiainanao. Mila miova ianao…
Ny toe-tsaina lehibe dia lasa andro lehibe izay lasa volana lehibe izay lasa taona lehibe izay lasa fiainana lehibe. - Mandy Hale
Ny fambolena toe-tsaina lehibe dia mitaky fotoana sy ezaka. Ny toe-javatra samihafa amin'ny fiainana dia mamorona antsika amin'ny fomba hafa mampiavaka antsika ...
Ny tanjoko amin'ny fiainako dia tsy vitan'ny hoe velona fotsiny fa ny hivoatra. - Maya Angelou
Eny, ny ankamaroantsika dia te hiaina fiainana miverina. Mihevitra izahay fa miaina amin'ny fiainana milamina…
Raha mandinika izay anananao eo amin'ny fiainana ianao dia hanana bebe kokoa hatrany. - Oprah Winfrey
Ny fiainana no mpampianatra tsara indrindra azonao. Tsy misy zavatra hafa ankoatry ny fiainana ...
Tsy izay ananantsika eo amin'ny fiainantsika fa izay ananantsika eo amin'ny fiainantsika no manisa. - JM Laurence
Raha ampitahaininao amin'ny fanananao sy ny olona zarainao ny fiainanao -…
Mahereza sy mitsiky amin'ny fiainana, na dia maharary indraindray aza izany. - Tsy fantatra
Ny maha-mazoto sy matanjaka amin'ny fiainana dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra iainana. Raha tsy ianao…
Aza avela ny hamono ny ho avinao taloha. - Tsy fantatra
Samy manana ny tantaram-piainany manokana daholo isika. Betsaka ny asa mafy nataony mba ho lasa…
Rehefa mihasarotra ny fiainana dia mitadiava tena mafy orina kokoa. - Tsy fantatra
Ny fiainana dia mandalo ireo sakana isan'andro. Ireny sakana ireny dia tsy inona fa ireo sakana sy fanamby…
Ny maharary anao anio dia mampatanjaka anao rahampitso. - Tsy fantatra
Tsy afaka hianatra zavatra amin'ny alàlan'ny fijanonana ao anaty faritra fampiononana anao ianao. Tsy afaka mianatra raha tsy rehefa…